Hurumende Inoti Basa Guru Gore Rino Kuwanira Vanhu Chikafu
Dare remakurukota raita neChipiri musangano waro wekutanga gore rino mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vachizivisa dare iri kuti nyaya hombe gore rino kuona kuti vanhu vawana chikafu chakakwana.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvekuburitswa kwemashoko, Amai Monica Mutsvangwa, pamusangano wavaita mushure memusangano wedare remakurukota.
Amai Mutsvangwa vatiwo VaMnangagwa vanoziva matambudziko akatarisana nevanhu uye vakurudzira makurukota avo nevashandi vehurumende kuti vagare muvanhu vachiona kuti zvirongwa zvehurumende zviri kufambira mberi uye zvichemo zvevanhu zvagadziriswa.
Vachitaurawo pamusangano uyu, gurukota rezvemari, VaMthuli Ncube, vati nyika iri kuedza nepainogona napo kuti vanhu vawane chikafu chinokwana ichishandisa mari yayo pamwe nerubatsiro kubva kune dzimwe nyika nemasangano anobatsira akaita seWorld Food Program.
VaNcube vabvumawo kuti nyika ichatenga chikafu chakauchikwa, kana kuti Genetically Modified Foods, GMOs kuitira nzara iriko asi vakati Grain Marketing Board ichatanga kuunganidza chibage chisiri GMO kuitira remangwana.
Zimbabwe yange isingabvumidze chibage cheGMO munyika, kunyange hacho change chichipinda munyika muchivande.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopiksa reMDC inotungamirwa naVaNelaon Chamisa, VaLuke Tamborinyoka, vati vanoshamiswa kuti hurumende yava kukoshesa nyaya dzechikafu pari zvino asi yakatambisa mari paCommand Agriculture.
Amai Mutsvangwa vatiwo VaMnangagwa vakurudzira vanoona nezvekudzvirirwa nekuchengetedzwa kwemutemo kuti vagadzirise nyaya yemakoronyera ari kuuraya nekubira vanhu goridhe, vachishandisa zvombo zvinosanganisira pfuti nemabhemba.
Asi VaTaomborinyoka vatiwo iyi inyaya iri kukonzerwa nevamwe muhurumende.
Imwe nyaya yazeiwa pamusangano wanhasi inyaya yechirwere cheCoronaVirus uye dare remakurukota raziviswa kuti hapana munhu ati abatwa nechirwere ichi muZimbabwe asi kuti pane vanhu mazana mashanu nevatanhatu vakabva kunyika dzimwe dzine chirwere ichi dzakaita seChina vari kuongororwa.
Gurukota rinoona zvehutano, VaOnadaia Moyo, vati vari kutora matanho ekudzivirira chirwere ichi pamwe nekuona kuti hachipararire nenyika yose.